CIN Khabar कस्तो छ, मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था ?
पर्यटन वर्ष विशेष
CIN Information System
कस्तो छ, मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था ? नागरिकले आशा अनुसारको अधिकार पाएनन् (अडियोसहित)
शोबिता रिसाल शनिबार, असोज ३, २०७७, १२:१३:००
काठमाडौं । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको आज ५ बर्ष पूरा भएको छ । दोस्रो पटक गठन भएको संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा ग¥यो ।
संविधान अनुसार देश संघीयतामा गयो, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएका छन् । काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रीत भएका अधिकारहरू वडा तहसम्म पुगेको छ ।
नागरिकले विकास निर्माण र शान्ती सुव्यवस्थाको थोरै भएपनि अनुभूति गर्न पाएका छन् । तर मौलिक हकमा नै उल्लेख भएका धेरै हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।
समानताको हकले भनेको छ, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनेछन् । समाजमा सबै नागरिकले समान रुपमा बाच्न पाउँनेछन् । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक वा जातीय, बर्गिय हिसाबले कोहीपनि कसैभन्दा कम वा फरक हुने छैन ।
तर पिँधका नागरिकले आर्थिक सामाजिक रुपमा समानताको महसुस गर्न पाएका छैनन् । महिलाहरू अझै पनि हरेक क्षेत्रमा बराबरी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै वकालत गरिरहेका छन् । नागरिकहरू बराबरी न्यायको पहुँचमा अझै पुग्न सकेका छैनन् ।
मौलिक हकले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएपनि जातका आधारमा गरिने भेदभाव र विभेद अझै पनि हट्न सकेको छैन ।
सम्पतीको हकले पैतृक सम्पतिमा छोरा/छोरीको बराबरी हक लाग्ने व्यवस्था मात्रै गरेको छैन, बराबरी कामपछि दम्पतीमा सम्पतीको बराबरी हक र श्रममा बराबरी पारिश्रमिकको व्यवस्था पनि संविधानले गरेको । तर अझै पनि प्रश्न छ कार्यान्वयन खै ?
खोजेको जस्तोसुकै सूचना पाउनेगरि सूचनाको हकले व्यवस्था गरेको छ । तर, मागेको सूचना पाइँदैन ।
कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास, दासी बनाउन, मन नपरेका काममा लगाउन, प्रथा परम्पराका आधारमा शोषण गर्न नपाइने विषय मौलिक हकमा भएपनि मानिसहरू अझै स्वतन्त्र र स्वच्छन्द जीवन बाँच्न पाइरहेका छैनन् ।
बिना कुनै प्रदुषण, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई संविधानले संरक्षण गरेको भएपनि मानिसहरू प्रदूषणकै कारण रोगी बन्ने क्रम घट्न सकेको छैन ।
निःशुल्क शिक्षाको विषय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन । संविधानले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छ तर सरकारकै तथ्यांक अनुसार नेपालमा झण्डै नौ लाख बढि युवा बेरोजगार छन् ।
स्वास्थ्यको हकले भनेको छ, प्रत्येक नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने छैनन् । र मौलिक हकले नै खानाकै कारण नागरिकको जीवन जोखिममा नपर्ने भनेको छ । कोरोनाका कारण स्वास्थ्य र खाद्यान्नमा नागरिकको अवस्था झन् नाजुक देखिएको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनिएपनि सरकारकै तथ्याङ्कले भन्छ, झण्डै ८ लाख नागरिकको ओत लाग्ने भरपर्दो छानो छैन ।
सामाजिक सुरक्षाको हकलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गुनासो गर्न छोडेका छैनन् ।
नागरिकलाई गुणस्तरीय खाद्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने बिषयलाई मौलिक हकले समेटेको छ, तर नागरिक गुणस्तरहिन र कुहिएको चामल खानुपर्ने अवस्थाको अन्य अझै भएको छैन ।
हरेक नागरिकको जीवनसँग जोडिएका ३१ प्रकारका सारभूत मौलिक हकको व्यवस्था छ । ती हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएको झण्डै दुई बर्ष पनि भयो ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनले मात्र पुग्दैन, संरचना र बजेट पनि चाहिन्छ ।
कतै आर्थिक स्रोतले धान्न नसक्ने भएकाले सरकार मौलिक हक कार्यान्वनको दायित्वबाट उम्किन खोजिरहेको त होइन ? सरकारको गति हेर्दा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ३, २०७७, १२:१३:००
रिसाल सीआईएनमा वरिष्ठ संवाददाता हुनुहुन्छ।
आगामी चुनावमा 'नो भोट'को व्यवस्था होला?
उच्च शिखर आरोहण गर्नेलाई मानपदवी दिइने
चिनिया टोली राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त
सगरमाथाको उचाइ अब ८८४८.८६ मिटर
'चीनले कोरोना महामारी फैलाएको होइन'
किशोरी बहस -"सिकाई कहिल्यै रोकिदैन"
पानी जिन्दगानी -१
आज आठौँ विश्व रेडियो दिवस, सुर्खेतमा विशेष कार्यक्रम हुँदै
रेडियो विगत वर्तमान, अवसर र चुनौती
दिसामुक्त जिल्ला, नागरिक सोध्छन्, 'शौचालय कहाँ मिल्ला'
पूर्ण साक्षर जिल्लामा निरक्षर नागरिक धेरै
ठाडी भाकामा मनका बह
सुदुरपश्चिमका घरःमहिलाको भर
गण्डकी प्रदेशको सम्भावनाः जलविद्युत र पर्यटन
नदी छेउमा तिर्खाइरहेको बस्ती
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, नेपालमा पनि मनाइँदै
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६९ औँ महासभामा योग सबैका लागि सधैँका लागि आवश्यक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको घोषणा गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सोमबार, असार ७, २०७८
प्राथमिकतामै पर्दैन विपद् व्यवस्थापन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अरु स्थानीय तहभन्दा चाँगुनारायण नगरपालिका अगाडि रहेको बताए पनि ऐनको दफा २४ मा उल्लेख भएबमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छैन । आईतबार, असार ६, २०७८
मेलम्चीमा भिषण बाढी-पहिरोः आसपासका बस्ती बगायो, ठूलो क्षति
अविरल वर्षापछि आएको पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेल्चीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । हेलम्बु गाउँपालिकाको अम्बाथान क्षेत्रमा पहिरो पनि गएको छ । बुधबार, असार २, २०७८
हाम्राे घर हाम्राे पाठशाला
रेडियाे बाल सिकाइ
साझा खबर Everyday 07:30 PM
साझा खबर Everyday 06:00 AM
सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) चाकुपाट ललितपुर, पाटन
कार्यालय - ९७७ ०१ ५२६०६६१
© CIN Khabar -2021 All rights reserved. Site by: SoftNEP